एमालेका सांसदको फेसबुक दुरुपयोग गरेर कयौँसँग रकम माग
गृहपृष्ठ » मुख्य समाचारहरु » एमालेका सांसदको फेसबुक दुरुपयोग गरेर कयौँसँग रकम माग
काठमाडौ । नेकपा एमालेका सांसद भूमि त्रिपाठीको फेसबुक दुरुपयोग गरेर कयौँसँग रकम मागेको पाइएको छ ।
उहाँको फेसबुकबाट प्रोफाईल, कभर लगायत सबै तस्विर डाउनलोड गरेर दुरुस्त अर्को फेक अकाउण्ट बनाएर च्याटबाट रकम माग गरेको पाईएको हो । कसैलाई अस्पतालमा छु ।
अचानक अप्रेशन परेको र आफ्नो अकाउण्ट लिमिट क्रश गरेको भन्दै च्याटमा रकम मागेको देखियो । यस्तो जानकारी आएपछि सांसद त्रिपाठी र उहाँका शुभेच्छुकहरुले स्टाटस नै लेखेर सचेत गराउनुभएको छ । यस्तो छ स्टाटस
सावधान ! भर्खरै मेरो नाममा सेम प्रोफाइल र कभर फोटो राखेर फेसबुकमा फेक आइडी बनाएर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर्दै फेसबुक साथी बनाउँदै अर्जेन्ट अपरेसनको लागि भन्दै रकम माग गरेर मेसेन्जर गरेको प्रमाण फेला परेकोले उक्त आइडीबाट आउने स्विकार नगर्नु हुन र कुनै रकम नदिनुहुन अनुरोध छ । यस किसिमको हर्कत गर्नेको पहिचान गरी कानुनी कार्वाहिका निम्ति प्रक्रिया अगाडी बढाइएकोले सबैमा सावधानीका लागि अनुरोध छ ।
सावधान ! भर्खरै धादिङ क्षेत्र नम्बर १ का माननीय सांसद भुमि त्रिपाठीको नाममा फेसबुकमा फेक आइडी बनाएर फ्रेन्ड रिक्वेस्ट गर्दै फेसबुक साथी बनाउँदै अर्जेन्ट अपरेसनको लागि भन्दै रकम माग गरेर मेसेन्जर गरेको प्रमाण फेला परेकोले उक्त आइडीबाट आउने रिक्वेस्ट स्विकार नगर्नु हुन र कुनै रकम नदिनुहुन अनुरोध छ । यस किसिमको हर्कत गर्नेको पहिचान गरी कानुनी कार्वाहिका निम्ति प्रक्रिया अगाडी बढाइएकोले सबैमा सावधानीका लागि अनुरोध छ ।
भूमी त्रिपाठी गत प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा फरिकलो अन्तरले विजयी हुने सांसद हो । उहाँ धादिङ क्षेत्र नम्वर १ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभएको थियो ।
तीन दशक देखि कम्युनिष्ट राजनीतिमा सक्रिए त्रिपाठीले नेपाली कांग्रेसका विश्व प्रसाद अर्याललाई २७ हजार १ सय ५३ मत अन्तरले पराजित गर्नुभएको थियो ।
गजुरीको तत्कालिन आदर्श माध्यमिक विद्यालयमा रहदा उहाँले २०३६ सालमा अनेरास्वियूको प्रारम्भिक कमिटीबाट राजनीति यात्रा शुरु गर्नुभयो । काठमाडौंमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने क्रममा अनेरास्ववियूमै सक्रिए रहनुभएका त्रिपाठीले नेपाल ल क्याम्पसमा स्ववियू सचिव समेत बनेर राजनीतिलाई अघि बढाउनुभयो ।
२०४५ मा पार्टी विभाजन भएपछि त्रिपाठी धादिङ फर्केर सक्रिय राजनीतिमा लाग्नुभयो । २०५४ सालमा नेकपा एमालेको सदस्य भएपछि त्रिपाठी २०६० सालमा नेकपा एमाले धादिङको सचिव त्यसपछि उपाध्यक्ष हुँदै २०७२ सालमा नेकपा एमाले धादिङ जिल्ला अध्यक्ष बन्नुभयो ।
धादिङको बेनिघाट गाउँपालिका वडा नम्वर ३ मलेखुमा जन्मिनुभएका भूमि त्रिपाठीले राजनीतिशास्त्रमा स्नातकोत्तर र कानुनमा स्नातक गर्नुभएको छ । उहाँ नेकपा एमालेको केन्द्रीय राजनीतिमा समेत परिचित राजनीतिज्ञ हो ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमामा आँच नआओस् भन्नेमा सबै सर्तक हुनुपर्छ : प्रचण्ड